कम्युनिष्टले डुबाउने भए गौतमबुद्ध विमानस्थल, अर्को मेलम्ची बन्ने खतरा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कम्युनिष्टले डुबाउने भए गौतमबुद्ध विमानस्थल, अर्को मेलम्ची बन्ने खतरा !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शनिबार, मंसिर ७, २०७६
काठमाडौं– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को मेलम्ची बन्ने खतरा बढेको छ । १९ बर्ष अघि काम सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । बर्षौ देखि विभिन्न मितिमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्ने घोषणा भएको छ, तर जनताको धारामा मेलम्चीको पानी आएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि अर्थात एक बर्ष अघि पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झर्ने भाका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले राखे।
मेलम्चीबाट ठेकेदार बाहिरिएपछि आयोजना सकिने मिति अझै अन्यौलमा छ। आयोजना सम्पन्न हुने नयाँ भाका आए पनि प्रधानमन्त्रीले यसपाली कुनै घोषणा गरेका छैनन्। मेलम्ची जस्तो भाका सरिरहने आयोजना भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनेको छ।
गएको असारदेखि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको उक्त आयोजनामा पछिल्लो समय फेरि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यी दुई आयोजनाका प्रकृति पक्कै फरक छन्, तर केही समानता पनि छन्। यी दुबै आयोजनाको लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक हो। दुबैमा निर्माण कम्पनी विदेशी छन्।
एसियाली विकास बैंक, अर्थ मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वय पक्ष सम्मिलित समीक्षा कार्यक्रममा एडिबीका अधिकारीले अन्तिम अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले काम नै छोडेर जान सक्नेतर्फ संकेत गरेका छन्। ‘भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ८४ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि सकिँदैन। तर उसले बाँकी काम पनि समयमा सम्पन्न गर्छ भन्ने आधार देखिँदैन’ एडिबीका एक अधिकारीले भने।
उनको संकेत यस्तो अवस्थामा ठेकेदार भाग्नेतर्फ थियो। पछिल्लो पटक थप गरिएको समयअनुसार विमानस्थलको सबै काम सन् २०२० को जनवरीसम्म सकिनु पर्ने थियो। तर अहिलेसम्म पनि कामको प्रगति ८४ प्रतिशत छ। अहिलेकै कामको गति भए सन् २०२० को मार्चसम्म सबै काम सकिने अवस्था रहेको एडिबीका ट्रान्सपोर्ट आयोजना विज्ञ नरेश प्रधानले दाबी गरे।
ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाताको रिपोर्टअनुसार जनवरीपछिका तीन महिनामा काम सकिने उनको विश्वास छ। तर अवस्था उनले भनेजस्तो छैन। विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले आफूसँग रकम अभाव भएको भन्दै काम छिटो गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।
२र४ महिना समय थप गरेर भए पनि आयोजना सम्पन्न गरी असारभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।